Nhau - Ndeapi maitiro ane zvigadzirwa zvealuminium zvapfuura nepakati kubva pakugadzirwa kwezvinhu kusvika pakugadzirwa uye kuumbwa?
Ndeapi maitirwo ane aruminiyamu zvigadzirwa akapfuura nepakati kubva mbishi zvigadzirwa kugadzirisa uye kuumba?
Aluminium chaiyo kukanda kunogona kuitwa muzvigadzirwa zvealuminium. Kunyangwe zviyero uye maumbirwo akasiyana, saizi chaiyo, kutaridzika kwakanaka uye kuita kwakadzikama kunogona kubatsira vanhu nevanhu, uye nekuvaka rakasiyana ruvara rwehupenyu. Muhupenyu hwedu, panogara paine kambani yealuminium zvigadzirwa, senge aluminium mahwendefa, aluminium machubhu, aluminium mafuremu, aruminiyamu makomba, nezvimwewo, izvo zvinovhara ese mativi ehupenyu hwedu. Izvo zvese zvakagadzirwa nealuminium kuburikidza neyakagadziriswa kugadzira, izvo zvakasarudzwa mbishi zvigadzirwa zvakafanana, asi yekupedzisira shamba yekushandisa uye chinzvimbo chichava chakasiyana, ichiumba zvakasiyana siyana zvigadzirwa zvealuminium, uye izvi zvinogadzirwa nealuminium zvigadzirwa Zvinogadziriswa neyakagadziriswa kuyerera.
Iyo yekugadzirisa kuyerera kwearuminiyamu zvigadzirwa inosarudza iro basa rainofanira kutamba kana basa ripi rainofanira kutamba mushure mekuumbwa. Naizvozvo, iko kugadzirwa kwearuminiyamu zvigadzirwa zvakanyanya kukosha. Ngatitarisei zvigadzirwa zvealuminium kubva pane zvakasvibirira kusvika pakuumba. Maitiro ane ruzivo.
1. Kufa uchikanda kuumbwa
Mhando yega yega yealuminium chigadzirwa ine yakatarwa saizi zvinodiwa, uye inofanirwa kuve yakanyatsojeka uye yakaomesesa kuitira kuti ishandiswe nyore nyore. Izvi zvinoda aruminiyamu chigadzirwa kugadzira vagadziri vane hunyanzvi kufa-vachikanda kuumba tekinoroji uye chakuvhuvhu kuvhura maitiro ekugona kugona kuwana kugadzirwa kwakawanda uye Kunatswa kugadzira. Kufa-kukanda kuumba ndiko kupisa iyo aruminiyamu kune imwe tembiricha, uye mushure mekunge iyo aruminiyamu chiwanikwa yanyungudika, inojowa muforoma, uyezve inogona kutorwa kubva muforoma mushure mekutonhora uye kuumba kuita zvigadzirwa zvealuminium zvine maitiro akaomarara uye chaiwo encombrements.
Mushure mekugadzirwa kwealuminium, iyo simbi pamusoro ichave neyakaomarara, kusaenzana, kukwenya, mabhureki, zvimedu, nezvimwewo. Zvigadzirwa zvealuminium izvi hazvina kunaka kana kukwana, saka zvigadzirwa zvealuminium zvinoda kukwenenzverwa mushure mekuumba. Icho pamusoro chakakwenenzverwa. Nzira dzakajairika dzekukorobha dzinosanganisira kugadzira makemikari, kupukuta kwemakemikari uye kukwenya kwemagetsi. Izvo zvakagadzirwa zvakagadzirwa nealuminium hazvina zvikanganiso, zvakatsetseka, zvakatsetseka, uye zvakachena pamusoro, segirazi.
Aluminium zvigadzirwa zvinosiyaniswa kubva kune ceramics, huni, mapurasitiki nezvimwe zvinhu, kwete chete maererano neyakaomarara simbi yacho pachayo, asiwo mune yakasarudzika simbi yekuumbwa kwesimbi yezvigadzirwa ivo pachavo. Aluminium zvigadzirwa zvinogona kudiwa muhupenyu, uye iyo simbi mameseji akakosha. Runako rwemweya wakadzikama unounzwa nevanhu, uye dhizaini inowanzo shandiswa kusimudzira kunaka kwesimbi yezvigadzirwa zvealuminium mukugadzirisa nekugadzira zvigadzirwa zvealuminium.
Dhizaini kudhirowa uye kukwesha zvese mishonga yakanatswa pamusoro pezvigadzirwa zvealuminium kuvandudza aesthetics, asi musiyano uripo pakati pekudhirowa waya nekukorobha ndewekuti inogadzira mitsara mitsva pasimbi pamusoro, ichichinja kushomeka kwenzvimbo yekutanga kana kushandisa mitsara yakasiyana . Yakajairwa uye yakafanana mitsara yekumisikidza simbi yekugadzirwa uye aesthetics yezvigadzirwa zvealuminium.
Chinhu chinonyanya kunetsekana nezve zvigadzirwa zvealuminium muhupenyu hwezuva nezuva kusanganiswa uye ngura. Kana dzangoitwa ngura, hadzizongokanganisa maonesthetics nekuda kwetsvina, asiwo zvikamu zvakaora zvichave zvisina kusimba uye zvinokanganisa kugadzikana kwese. Anodizing inokosha pano. Maitiro. Anodizing inzira yekurapa yepamusoro isingakwanise chete kugadzirisa kutaridzika kwezvigadzirwa zvealuminium, asiwo yavo kuramba ngura uye kupfeka kuramba. Nekuisa iyo aruminiyamu zvinhu mune inoenderana electrolyte uye yakatarwa maitiro mamiriro, magetsi emagetsi anoiswa pamusoro pechinhu chealuminium zvigadzirwa An oxide firimu inogadzirwa. Aluminium chigadzirwa kugadzira vagadziri vanogona oxidize pamusoro pearuminiyamu zvigadzirwa mumarudzi akasiyana-siyana panguva yeanodizing maitiro, kuitira kuti zvigadzirwa zvealuminium zvine mamwe maitiro ekuumba muchitarisiko, uye panguva imwecheteyo, iyo oxide rukoko rwakakora uye harisi nyore kudonha. mhando yezvigadzirwa zvealuminium yakagadzikana uye yakasimba.
Izvo zvigadzirwa zvealuminium zvatinosangana nazvo muhupenyu hwedu hwezuva nezuva hazvisi chete zvakasimba uye zvinogara, asi zvakare zvinonakidza uye zvakanaka. Kuti uwane kuita kwakadai, hazvipatsanurike kubva mukugadzirisa uye kuumba maitiro anozivikanwa nemugadziri. Ehezve, maitiro ataurwa pamusoro apa haasi ese, vagadziri vanofanirwa kufunga Kugadzira ese marudzi earuminiyamu zvigadzirwa, sarudzo yehunyanzvi inofanirwa zvakare kutariswa. Zvisinei, zvinogara zvakafanana. Kuchenjerera kukanda uye kutsvaga kwemhando ndiyo tenet iyo vagadziri vanofanirwa kutsigira mukugadzirwa kwearuminiyamu zvigadzirwa.